३० प्रतिशतले बढ्यो सन नेपाल लाइफको नाफा, कस्तो छ वित्तीय अवस्था ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बीमा > ३० प्रतिशतले बढ्यो सन नेपाल लाइफको नाफा, कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
३० प्रतिशतले बढ्यो सन नेपाल लाइफको नाफा, कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो तैमासम्म ९ करोड ५५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
कम्पनीले बिहीवार सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक वित्तीय अवस्थाको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । कम्पनीको नाफा गत वर्षको सोही अवधिका तुलनमा ३०.२८ प्रतिशतले बढेको हो । गत वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ७ करोड ३३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
कम्पनीले यस त्रैमासम्ममा १ अर्ब ६२ करोड ६९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीको बीमाशुल्क आर्जन गत वर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा ९५ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ८३ करोड ४२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ शुल्क आर्जन गरेको थियो ।
कम्पनीको चुक्तापूँजी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जगेडा तथा कोषमा ३३ करोड २२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, जीवन बीमा कोषमा २ अर्ब १८ करोड ३१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र महाविपत्ती जगेडा ३ करोड ६९ लाख २१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
२०७८ वैशाख ३० गते १५:०२ मा प्रकाशित
बोर्डको ६ बुँदे निर्देशनः लगानीकर्तालाई घरखर्च दिनेदेखी सेयर बेचेको पैसा तत्काल उपलब्ध गराउनेसम्म
कालीमाटी तरकारी बजारको आजको थोक मुल्य विवरण
सम्पत्ति लिलाम बिक्री सम्वन्धी ग्लोबल आइएमई बैंकले निकाल्यो अत्यन्त जरुरी सूचना
आज पनि अत्यधिक मात्रामा घट्यो सुनको मूल्य !
नेप्सेमा २ लाख ४८ हजार ८८० कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत
१६६% हकप्रदमा आवेदन खुल्ला,हेर्नुहोस् कहाँ–कहाँबाट आवेदन दिने ?